ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်ကြားကွာခြားချက်ကိုသင်သိပါသလား။ ပြီးတော့တစ်ခုကတစ်ခုကတစ်ခုထက်ကောင်းတာရှိလားသိလား။ ဖန်မျှင်ထည်ကျိန်းသေနှစ်ခုပစ္စည်းများ၏အဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖန်ထည်များကိုအရည်ပျော်။ မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင်ထုတ်ယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
လူမီနီယမ် vs ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာသည်လူမီနီယမ်ကိုအမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများဖြင့်အစားထိုးနေပြီးလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းထိုသို့ပြုလုပ်နေသည်။ ဤအမျှင်များသည်သူတို့၏ထူးကဲသောခိုင်ခံ့မှုနှင့်တင်းကျပ်မှုကြောင့်လူသိများပြီးအလွန်ပေါ့ပါးသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဖန်တီးရန်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကြိုးမျှင်အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်နှင့်ပေါင်းစပ် ...
Carbon Fiber Tube ဆိုတာဘာလဲ။
ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန် Tubular အဆောက်အ ဦ များကျယ်ပြန့် applications များအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်များ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားစေသည်ကိုမအံ့သြသင့်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်များသည်သံမဏိ၊
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာသည်ရေ တိုက်၍ ဝင်ရိုးစွန်းများကိုယနေ့ခေတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေသည်
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွမ်းကျင်သော ၀ င်းဒိုးအ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့်သန့်ရှင်းရေးစက်တွင်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကထက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသောနည်းပညာထက်သူတို့အတွက်ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာများရှိသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသစ်များသည်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကို အသုံးပြု၍ ရေတိုက်ကျွေးရန်အတွက်ပြတင်းပေါက်သန့်ရှင်းရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရုံသာမကပိုမိုလုံခြုံစေပါသည်။ ရေပေးရေးထမ်းပိုးထမ်းများ ...
Window သန့်ရှင်းရေးဟာပုံမှန်လုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့် ၀ င်းဒိုးကိုမဆိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်သင့်တော်သောကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများရှိသည့်ပညာရှင်များအတွက်တကယ်ပင်သီးသန့်ထားရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ပြတင်းပေါက်များကိုသန့်ရှင်းလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ၀ င်းဒိုးသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖွင့်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များ၊